Aramaan ‘imbooc’ Hara Danbal, Qoqaa fi Laga Booyyee Jimmaatti argamu irratti sadarkaa yaaddessaadha jedhamuun uumamuunsaa himame - | - OBN
Aramaan ‘imbooc’ Hara Danbal, Qoqaa fi Laga Booyyee Jimmaatti argamu irratti sadarkaa yaaddessaadha jedhamuun uumamuunsaa himame
[OBN 18 02 2010] Aramaan ‘imbooc' Hara Danbal, Qoqaa fi Laga Booyyee Jimmaatti argamu irratti sadarkaa yaaddessaadha jedhamuun uumamuunsaa himame.
Lagoonni fi haroon kun qonna dabalatee tajaajila invastimantii gara-garaatiif kan oolan waan ta'eef aramaan kun irratti mul'achuunsaa yaaddoo uumeera.
Aramaan ‘inbooc' kan mul'ate waggootaan dura haroo xaanaa irratti yoo ta'u, hojiin aramaa kana haala quubsaadha jedhamuun ittisuu waan hin-hojjatamneef baatiiwwaniin dura heektaara kuma 7 haruchaa hanga haguuguu ga'uunsaa kan yaadatamudha.
Aramaan kun salphaatti ofiisaa kan bakka of buusuu fi babal'atudha.
Qaama bishaanii kanneen saffisaan weeraraa kan jiru aramaa kana hir'isuuf humna namaan hojjachuuf karoorfamuusaa Abbaan-taayitaa Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa buufata keenya beeksiseera.
Abbaan-taayitichaa akka jedhettis Qoqaan qaamni bishaanii heektaara 800 ol ga'u aramaa kanaan weeraramuu isaafi Haroon Danbalis kiiloo meetira 1.6 bal'ina meetira 50 qabu irratti mul'achuusaa Daayirektarri Heddumina Lubbu-qabeeyyii Obbo Birihaanuu Idati kan himan.
Qaamoleen bishaanii kunniin faayidaan isaanii baay'ee waan ta'eef aramaan kun rakkoo hawaas-dinagdee hawaasa naannoo irratti qaqqabsiisuu danda'a.
Naannicha keessatti qaamolee bishaanii aramaa kanaan weeraraman keessaa biraan ammoo Jimmaatti kan argamu Laga Booyyeeti.
Aramaan kun lafa heektaara 50 lagichaa kan haguuge ta'uusaa fi lagicha oolchuuf hojjatamaa kan jiru ta'uu Inistitiyuutii Heddummina Lubbu-qabeeyyii Itiyoophiyaatti Daayirektarri Bosonaa, Lafa Dheeddichaa fi Biqilootaa Doktar Deebisaa Lammeessaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetiif ibsaniiru.
Aramaa ‘Inboocii' haroowwanii fi lageen biyya keenyaaf yaaddoo ta'aa dhufe kana balleessuuf hanga yoonaa humna namaa qofaan hojjatamaa kan jiru yoo ta'u, duulli humna namaa qofaan itti ba'ame kun babali'ina isaa too'achuuf furmaata waaraa akka ta'uu hin-dandeenye ibsameera.
Kanaafis Ministeerri Bishaanii, Jallisii fi Elektirikaa rakkoo kana hundeedhaa fufuuf hojiilee jalqabuusaa beeksiseera.
Furmaata jedhee kan qabate maloota lama keessaa tokko ammoo aramaa kana meeshaa aramaa kana jalasaatii buqqaasu biyya alaadhaa fichisiisuudha.
Meeshaan kun aramaa kan buqaasuun tinfa aramaa kanaaf mijatoo ta'an qulqulleessuuni fi aramaa kana gara xaa'ootti kan jijjiiruu dandeessisu akka ta'e himameera.
Meeshaan kun baasii Yuuroo miliyoona 1.5 hanga miliyoona 2 akka gaafatu himameera.
Kana malees, haroowwan irratti hojii ittisaa hojjachuu kan dandeessisu yunivarsitiiwwan 5 ol waliin sanadi waliigaltee mallatteeffamuusaa ragaan arganne ni-mul'isa.
575 Views 10/29/17